Imidiya yokuncokola kunye noLawulo lokuchasa | Martech Zone
Imidiya yokuncokola kunye noLawulo lokuchasa
NgoLwesibini, Matshi 2, 2010 NgoMgqibelo, Novemba 28, 2015 Douglas Karr
Ngale ntsasa bendifunda iphepha elimhlophe elifunyenwe kwindawo ka-Aprimo, kwi ukudibanisa imidiya yoluntu.
Abathengisi akufuneki baqale ekuqaleni ukwakha amandla eendaba ezentlalo okutshintsha amandla kumxube wonxibelelwano okhoyo. Ngokunyanga amajelo osasazo njengolwandiso lweendaba ezintsha kunye neWebhu 1.0, abathengisi baxhaphaza amandla ayo amatsha ngaphakathi kwinqanaba labo kunye nezixhobo.
Umshicileli uthetha ku iindima zentengiso kwaye ukuthengisa kuguqulwa ngandlela ithile. Abathengisi-abangazange badibane noluntu-ngoku kufuneka banxibelelane kwaye baphathe uphawu esidlangalaleni. Kuya kufuneka bayifezekisile le ngaphandle koqeqesho kuyo nayiphi na into ulawulo lwezichaso. Ndiyibonisile le nto nakwifayile yam ntetho kwiWebtrends Zibandakanye.
Kwangelo xesha, yethu abathengisi kulindeleke ukuba bathathe izikhundla kwiMithombo yeendaba yeNtlalontle, ukumilisela iindlela ezininzi zokuthengisa kunye nezonxibelelwano abangazange bazifezekise.
Iphepha elimhlophe lenza iingcebiso ezine:
Yenza indawo ekujoliswe kuyo ngokubeka umntu kubasebenzi bezentengiso ophethe imidiya yoluntu. Lo mntu kufuneka abe noxanduva lokuyila isicwangciso-qhinga sentengiso-kwezentlalo, kubandakanya nokwenza inkqubo eya kuthi ibeke imida kwizithuthi eziza kusetyenziswa, ukuba ziya kulawulwa njani, nokuba ngabaphi abantu ekufuneka babelwe zona ngokungqinelana nomgaqo-nkqubo wequmrhu.
Sebenzisana neminye imisebenzi abathatha inxaxheba kumjikelo wokuthenga omkhulu, kubandakanya iinkonzo zabathengi kunye nolawulo lwemveliso. Ngo-2010, ngaphezulu kwe-60% yeenkampani ze-Fortune 1000 ezinewebhusayithi ziya kuba nolunye uhlobo loluntu kwi-intanethi olunokusetyenziselwa iinjongo zobudlelwane babathengi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ukuthengisa kuqonde indima yemidiya yoluntu kwimisebenzi yangaphambi kokuthengisa izinto ezivela kwi-postsales inkonzo yabathengi ejolise ekuqinisekiseni ukuba ubunini babiwa ngokufanelekileyo kwimisebenzi eyahlukeneyo ethatha inxaxheba ekwenziweni kwesicwangciso esikhulu seCRM.
Fumana abantu kubasebenzi bezentengiso baye kuqeqesho lokuthengisa, ngakumbi abo bathatha inxaxheba kwiiforum zentlalo ezenza ukuba unxibelelwano lomntu ngomnye. Abathengisi abangenalo uqeqesho okanye amava ku "ulawulo lwezichaso" ngabona basesichengeni kwilizwe losasazo lwentlalo, kuba abathengi bagxeka ngokukhululekileyo umboneleli kunye neemveliso zayo kwiiforamu zikawonkewonke.
Yenza njengomsebenzi phakathi kunye neenkokheli zentengiso kunye nabathengisi abanqwenela ukuthatha inxaxheba kumajelo eendaba ezentlalo, ngakumbi iindawo apho banxibelelana khona babaninzi, kwaye baqeqeshwe ngolwalathiso olufanayo lokuhlela olunikezelwa kubathengisi nakwezonxibelelwano ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko lophawu kunye nemiyalezo engaguquguqukiyo.
Ndinike isikhokelo malunga Abathengisi baqala ukwamkela iMithombo yeendaba yeNtlalo -Kodwa iinkcukacha zephepha elimhlophe ngakumbi ngakumbi kwisicwangciso sobumbano ngokubanzi. Nam bendikhona ukuya kuqeqesho lokuthengisa Kunyaka ophelileyo kwaye ndingayincoma kakhulu kubo bonke abathengisi! Ndenza udliwanondlebe noBill Godfrey, CEO we I-Aprimo namhlanje, kwaye sizakuxoxa ngale nto-jonga ividiyo ezayo!
Ukudityaniswa kuka-Aprimo, kwisoftware yentengiso yenza ukuba abathengisi be-B2C kunye ne-B2B bakwazi ukuhamba ngempumelelo kwindima yokutshintsha kwentengiso ngokulawula uhlahlo-lwabiwo mali kunye nenkcitho, besusa iisilos zangaphakathi ngokuhamba komsebenzi kunye nokwenza amaphulo amatsha amajelo amaninzi okuqhuba umlinganiso we-ROI. isuka e I-Aprimo Website.
tags: ulawulo lwezichasoinkcaso yokuthengisaImidiya yokuncokolaulawulo lwezichaso ekuhlaleni
Izimvo zakho njani kwiNqanaba lokuKhangela kwiNjini
Kutheni iTactTarget kunye neCoTweet yenza ingqiqo
Nzulu Ripples Inc.
Mar 2, 2010 ngo-10: 59 AM
Imidiya yokuncokola ngokuqinisekileyo ikhawulezisa ukucinga kwakhona "kwamasebe" njengoko yonke imigca ingacacanga. Ilungele ishishini.